I-Alvernia University Yamkelwa: I-SAT izikolo, Ukufundiswa ...
Izikolo ze-SAT, Imilinganiselo yokwamkelwa, iNcedo lwezeMali, iiScholarships & ezininzi
I-Alvernia University Admissions Overview:
IYunivesithi yaseAlvernia inezinga eliphezulu lokumkela: ngo-2016, izinga lokumkela lalingama-74 ekhulwini. Abafundi bangakhetha ukufaka isicelo kunye nesicelo esiqhelekileyo okanye isicelo seyunivesithi. Ngayiphi na indlela, isicelo esipheleleyo sifaka i-SAT okanye i-ACT izikolo, ulwazi malunga nemisebenzi yexesha elithile, kunye nencoko. Iileta ezimbini zinconywa zifunekayo kubafaki bezicelo.
I-Alvernia University Yamkelwa kweNyuvesi: 74 ipesenti
SAT Ukufunda okubalulekileyo: 440/540
UMTHETHO WOMTHETHO: 19/23
IYunivesithi yaseAlvernia Inkcazo:
I-Alvernia Yunivesithi yinkampani yabucala, iRoma yamaKatolika e-ekrasi engu-121 e-Reading, ePennsylvania. UFiladelphia ihora nje nje. I-Alvernia ingomunye weeyunivesithi ezingama-22 ze-Franciscan kunye neekholeji zelizwe, kwaye ngoko, isikolo sigxile kwinkonzo, ukuthobeka, ukucamngca, ukuthula nokuziphatha. Abafundi banokukhetha ukusuka kuma-majors angaphezulu kwama-50 kunye nabantwana, abaneenkalo zobugcisa kwimpilo kunye nezoshishino ziyaziwayo. Izifundo ziyaxhaswa ngabafundi abane-12 ukuya ku-1 abanomlinganiselo wokufundela / ootitshala , kwaye abafundi bangalindela ukufumana ingqwalasela eninzi kubafundi babo ngeminyaka yabo e-Alvernia.
Ixabiso leyunivesiti ekufundeni, kwaye phantse bonke abafundi bazalise uhlobo oluthile lwe-internship, uqeqesho, umsebenzi wezentsimi, iprojekthi yeenkonzo, okanye iphrojekthi yophando. Ubomi beCampus busebenza kunye namaqela angama-55 kunye nemibutho yabafundi. Ngaphambili kwezemidlalo, i-Alvernia Crusaders incintisana kwiNkomfa ye-NCAA III ye-Commonwealth Conference.
Izitulo zaseyunivesithi kunye namadoda angama-9 abesilisa kunye nabase- Abafundi banokuthatha inxaxheba kwiqela lezemidlalo zangaphakathi njengebhola ye-volleyball kunye nebhola yebhola.
Ubhaliso lwabonke: 2,872 (i-2,323 izifundo zakudala)
Ukuhlukana kwezesini: ipesenti ezingama-26 / ama-74 ekhulwini amabhinqa
Ipesenti ezingama-74 ezipheleleyo
Imfundo kunye neMali: $ 32,270
Igumbi neBhodi: $ 11,240
Ezinye iindleko: $ 2,500
Iindleko ezipheleleyo: $ 47,510
IYunivesithi yase-Alvernia yeNcedo lwezeMali (2015 - 16):
Ipesenti yabafundi abatsha abafumana uncedo: iipesenti ezili-100
Izibonelelo: $ 18,903
Imali: $ 10,005
I-Popular Majors: I- Accounting, iMpilo yokuziphatha, uLawulo lwezoRhwebo, uLwaphulo-mthetho, uLondolozo
Ukugcinwa kwabafundi be-First Year (abafundi bexesha elizeleyo): ama-82 ekhulwini
Ukukhutshwa kwezinga lokuphuma: ama-37 ekhulwini
Ireyithi yoNyaka weSifundo seMinyaka emi-4: iipesenti ezingama-37
Ireyithi yoNyaka weeNgqesho ze-6: ama-53 ekhulwini
Ezemidlalo zaMadoda: Ibhola lebhola, iBhola, iLacrosse, iNgcahla, iGalofu, iTatiyati, I-Track and field, Izwe eliPhambukayo
Ezemidlalo zaBasetyhini: Iqonga lebhola, i-Softball, iVolleyball, iTennis, i-Track and Field, iBhola lebhola, iKhokhi yeHockey, ilizwe eliphambeneyo
Unomdla kwiYunivesithi yaseAlvernia? Unokuphinde ufune ezi Kholeji:
Ukuba ukhangele isikolo esiseduze neAlvernia enxulumene neCawa yamaKatolika, kunye ne-Order yaseFrancis ngokukodwa, qiniseka ukuba uhlola izikolo ezifana neYunivesithi yaseNumann, iYunivesithi yeSt. Bonaventure, iYunivesithi yaseFelician, iYunivesithi yaseSt Francis , okanye iKholeji yaseSiena .
IYunivesithi yeWaenerener , iKholeji yakwaMesiya, iYunivesithi yeArcadia kunye neKholeji yaseLydney nayo inokukhetha. Ezi zikolo ngokubanzi zifana nobukhulu obufana ne-Alvernia, kwaye zonke zikwinkomfa yeCandelo III yezemidlalo.
I-Sacred Heart University Admissions Facts
IYunivesithi yase-Arkansas kwi-Pine Bluff Admissions
Bonke abafazi abaye baqhubela umongameli wase-US
UGeorge HW Bush Ubungqina obukhawulezayo
Iintlobo ezingama-31 ze-Invertebrates
5 Ukuziphatha kunye neZingcebiso Zokunceda Ukwazi Xa U tyelela i-Sikh Gurdwara
I-Perimeter, Indawo kunye noMqulu weeMveli eziNinzi kunye namaSombane
Hernan Cortes kunye neeKapa zakhe
Scorpio, i-Scorpion: Izibonakaliso zeZodiac
Uluhlu lweeholide zeeNtaliyane kunye neeMithendeleko ze-Italy
I-"Heart of Darkness"
Indlela yokwenza iConfugation Third (-ire) kwiItalian
Fumana Uphulo Olubi Ngaloo Maqhinga Athandekayo Ngothando
Impembelelo yaseMexico: I-Battle ye-Celaya